Ukunconywa ngoba amadoda ebaluleke kunjalo nakwabesifazane. Smart owesifazane uyaqonda ukuthi ukuncoma - yindlela enhle ukuze lizuze abantu umnumzana. Kumele ngobumnene ukholisekile ukuthi nguye - ohlakaniphe kunazo, enamandla, isabela, njll Nokho, ubulili namandla kwasekuqaleni, hhayi abantu bathembane kakhulu. Okwesibili, Cavaliers wayengacabangi kanjalo, njengoba abesifazane. Futhi iqiniso lokuthi sinikele ngokuphila kulindeleke ukuthi njengoba a ukuncoma, bangakwazi kakhulu ukuqonda. Ngokwesibonelo, kunconywa ukuba umuntu emavesini ukwenza kube ncamashi umbono ofanayo njengoba amazwi okuhle temibhalo yephrozi. Ngakho-ke, abafisa akhohlisa umngane wakho, bayacabanga kuqala mayelana nendlela kwathiwa yena angajabula.
Izincomo, ngokuba lowo muntu? Sizokwenza ukuqonda.
Abesilisa zihlukile. Ezinye ukuqapha ngokucophelela umzimba wakho, ningaphumi "unyakazisa", kodwa ambalwa abanandaba ekukhuleni. Abanye bakholelwa ukuthi indoda kumele ibe ohlakaniphile, futhi ukubonakala kwakhe akusho lutho. Abanye nakanjani wenze umsebenzi, futhi ngesikhathi esifanayo ekuthuthukiseni ngokomzimba nangokwengqondo. Kunezinhlobo narcissistic abacabanga kukhona kakhulu-kakhulu. Bonke labo bantu babe nemibono engafani ezindabeni zokuphila, ngakho izincomo uhlobo yilowo nalowo kufanele sehluke.
Ukunconywa ekubukekeni. Basengozini ikakhulukazi daffodils besilisa. Amazwi akho ngalokho banawo sibalo kakhulu, futhi imisipha omkhulu futhi izingalo nemilenze eqinile ngempela ukuvusa ezinhliziyweni zabo okungenani isithakazelo umuntu wakho. Khona-ke ungakwazi ukwengeza ukuthi nge isiqhwaga ezinjalo hhayi ngesaba ukuba ngisebenzise ukuphila kwami, ukuthi - usizo olukhulu, lapho kulula futhi ethembekile.
izincomo "Esingokomoya". Umuntu ngamunye bazokujabulela ukuzwa ukuthi is kahle ababeyizazi ukuphila, nguYe zihlakaniphile futhi kungaba asingathe noma yisiphi isimo. Ungesabi ukuba adumise ikhono lakhe uqaphela konke, amakhono kohlaziyo , njll Qiniseka ukuthi agcizelele ukuthi wena Akungabazeki owesifazane ohlakaniphile, kodwa ngeke kuqhathaniswe nge zinde ezifana yokucabanga.
Amanye amadoda uthanda kumelwe adunyiswe kakhulu amakhono abo. Njengokulotshiweyo ukuthi kahle fixed esidayisa njengoba esihlwabusayo silungiselela, emangalisayo kangakanani uchwepheshe noma umholi. Lezi zinto kufanele zibe izincomo kumuntu. Izibonelo: "Isithandwa sami, ukuthi kulula ingabe sicacise lesi simo eziyinkimbinkimbi. Wena zazi abantu kahle. Utholé isixazululo esingcono kakhulu. "
izincomo Universal ngoba amadoda
Kunezindlela eziningana pleasantries kuyiphi ancibilike bonke abantu, kungakhathaliseki ukuthi ishede bobuntu bakhe, okucabanga namakhono ethu ngokomzimba. Kuyinto kunconywa, ukugqamisa nesihluku zabo, machismo, siqinisekise omele wobulili oluqine neqiniso lokuthi wayeseholela - iduna yangempela. "O, s'thandwa, indlela emangalisayo unuka! Mina ku ukunambitheka wakho uqala ukuzizwa isiyezi! Une izwi esivusa amadlingozi kangaka! Yini enhle (grey, ensundu, njll) esweni! Ngicabanga ukuthi abukeka ngqo umphefumulo wami. Une enjalo izindebe sexy (izandla, touch, njll), "Ngikholwe, ngithi ngephimbo elifanele ngesikhathi esifanele, izilokotho ezinjalo umuntu umxhwele, ayinike ukuzethemba, futhi - ukufaka isikhalazo. Ungangitsheli inhlonipho kaningi kakhulu futhi amnandi kakhulu: Madoda, yebo, hhayi njengoba olukhohlisayo njengathi, kodwa ukuqaphela falsity ngempela onekhono.
Siyini-antenna ohlangothini, Wi-Fi?
Siyakuhalalisela intombazane eneminyaka engu entsha
Stone Morganite (ezihlukahlukene ibherule): incazelo, izakhiwo umlingo Izimpawu zezinkanyezi